DHAGEYSO: Xasan Sheekh ”Farmaajo wuxuu sameynayo ‘Dastuurka’ sax kuma ah waa sharci darro” – HalQaran.com
DHAGEYSO: Xasan Sheekh ”Farmaajo wuxuu sameynayo ‘Dastuurka’ sax kuma ah waa sharci darro”
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka ee UPD, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa eedeyn kulul u jeediyay Madaxtooyadda Soomaaliya, kaddib markii galabta Shir jaraa’id uu ku qabtay magaalada Muqdisho.
Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah hoggaanka sare ee Madasha Xisbiyada Qaran ayaa sheegaya, in Madaxweyne Farmaajo uu howlihii dalka oo dhan ay ku soo aruureen gacantiisa.
Wuxuu kaloo xusay, in Madaxweyne Farmaajo si cad u baalmaray dastuurka marka laga eego tallaabooyinka uu qaaday tan iyo maalintii la doortay.
“Madaxweynuhu waxa uu sameynayo dastuurka sax kuma ahan, waxba kama duwana Madaxweynaha waxa uu sameynayo nin gabar ay kala tageen weli ilmo u dhaleyso, xaaskii ay kala tageen oo furay asoo weli xaas ay u tahay oo kale waaye, Xukuumadda maanta jirtana waa saas, sharci maaha waa sharci darro”, ayuu yiri Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh ayaa sheegaya, in aan la aqbalin karin 53 maalmood uu dalku ahaado Ra’iisul Wasaare la’aan, islamarkaana shaqada hadda socotaa ay u muuqato kaligii talisnimo.
Wuxuu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay, in laga shaqeeyo sidii loo badbaadin lahaa dalka oo ay sheegeen in hadda uu ku sugan yahay xaalad halis ah.
Ugu dambeyn, Xasan Sheekh ayaa sheegay, in madaxweynaha JF Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu daawanayo xukuumad shari darro ah.
Halka hoose ka dhageyso Shirka jaraa’id Xasan Sheekh:
Tags: Farmaajo wuxuu sameynayo waa sharci darro, Shir jaraa'id, Xasan Sheekh
DHAGEYSO: Madaxweynihii hore K/Galbeed Shariif Xasan ”Dalka 60 maalmood inuu R/wasaare la’aan ahaado weli kama dhicin”
Madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Galmudug oo kawada hadlay arrimo la xiriira doorashooyinka